PropBase - # 1 Beka iVenkile yokuHlala kwiVenkile yethiyetha | Plum emangalisayo
IpropBase -Iiseti, iiProps, indawo yogcino lweedatha
Ukuphelisa isiphithiphithi. Inkqubo yokusebenza enamandla kunye nobungcali yokuqhuba istudiyo esihambelanayo, iqonga lezemidlalo okanye indawo yemveliso
Esona siseko sinamandla kunye nobuchwephesha kulungelelwaniso
1. IpropBase-ivumela umbutho onenani elikhulu leepropu ezivela kwimidlalo, kwiimuvi, njl.njl. Ukushicilelwa kwekhowudi ye-QR kunye nokuskena kusetyenziswa izikena zamazinyo eziluhlaza kunye nokunye. Ngolu luhlu lweenkcukacha kunokwenzeka ukuseta indawo yokugcina impahla yeqonga kwilizwe lonke. Kutheni le nto iiseti, iipropu kunye nesinxibo sika'Peter Pan 'okanye' uFiddler eluphahleni 'zenziwe ngaphezulu konyaka? Gcina imali, uphinde usebenzise iipropathi zokugcina impahla, iiseti kunye nesinxibo. Yabelana okanye urente iipropu kunye neeseti. Zityikitye kwaye usayine ungene kuzo. Okona kungcono kuzo unokufumana ngokukhawuleza. Le yipropathi kwaye ibeka isiseko sedatha kwimidlalo yeqonga nakwimidlalo bhanyabhanya. Kwakhona igrama, izikolo eziphakamileyo kunye neeyunivesithi.
2. Iziko ledatha yeVidiyo yeRental Equipment Rental (VERD) -Liziko ledatha elixabisekileyo leenkampani ezinoluhlu olukhulu lweekhamera (ividiyo kunye nangoku), izibane, iipropu, iintambo, izixhobo zesandi, kunye nezinye izixhobo ezahlukileyo eziqeshiswa ixesha elifutshane kunye nexesha elide. Esi siseko sedatha sivumela inkampani eqeshisa izixhobo zevidiyo ukuba ibhale uluhlu, irente, i-invoyisi kunye nokulandelela izixhobo kuwo onke amanyathelo enkqubo. Ivumela ukwenza irente ngokukhawuleza, ngokungaguquguqukiyo nangokufanelekileyo.
Zombini iziseko zedatha zisekwe kulwazi oludumileyo nolusebenzisekayo kodwa olubanzi lweFayilemaker kwiMac, Win, iOS, Android kunye neWebhu. Qalisa kubo kwiwebhu ukuze usebenze kuzo zonke izixhobo. Njengoko ukhula kwaye iimfuno zakho kunye neeasethi zikhula, isiseko sedatha sinokukhula.
Jonga umboniso wesilayidi apha ngezantsi xa ufuna iinkcukacha ezingakumbi.
Le ntetho ye- Microsoft Office ifakwe ngaphakathi kwiOfisi ekwi- Intanethi .
The Inkqubo yeRentals kubandakanya ukubanakho ukulawula abathengi kunye nabafowunelwa, ukwenza iikowuti zokurenta ngokuzenzela ngokuzenzekelayo ii-odolo zomsebenzi wokunxibelelana kunye nee-invoice, i-imeyile edityanisiweyo yeekowuti zokurenta kunye nee-invoyisi, ulawulo lwempahla kubandakanya ukudityaniswa kwezinto ngokwamaqela ezinto zoluhlu kunye nokudityaniswa "kokulahleka nokonakala" kokulandela kunye ukunika ingxelo.
Siza kwenza ngokwezifiso iPropBase ngokweemfuno zakho. Iiyure ezili-10 zokuqala zisimahla:
le lawulo lwezinto Inkqubo ebandakanya ukufaka i-bar-khowudi
IpropBase yakhiwe / yacwangciswa kwiFayilemake eyona ilula ukuyisebenzisa kunye neyona database inamandla esebenza kwiMac, Win, iOS, Android kunye neWebhu
Inkampani yeNgeniso $3000 IpropBase kunye neeyure ezili-10 zokwenza ulwenziwo / inkxaso mahala
Inkampani yeTheatre $2000 IpropBase kunye neeyure ezili-10 zokwenza ulwenziwo / inkxaso mahala
Ezemfundo okanye ezingenzi nzuzo $1500 IpropBase kunye neeyure ezili-5 zokwenza ulwenziwo / inkxaso mahala
iinketho Emva kweeyure zokuqala ezili-10 zasimahla emva koko zikhethwe.
Ulwenziwo / Inkqubo $ 150 / iyure Ukufikelela kwiiyure ezili-9 ngokwezifiso. (kuthengwe kwangaphambili)
Ulwenziwo / Inkqubo $ 125 / iyure Iiyure ezili-10 ukuya kwiiyure ezingama-49 ngokwezifiso (kuthengwe kwangaphambili)
Ulwenziwo / Inkqubo $ 10 / iyure Iiyure ezingama-50 okanye nangaphezulu ngokwezifiso (kuthengwe kwangaphambili)
Support Tech $ 250 / ngonyaka Inkxaso (imeyile / inkxaso yefowuni kunye nokulungiswa kwe-bug) (kuthengiwe kwangaphambili)
Ukunyuka kwedatha $ 250 / umzekelo
Ifuna ukucwangciswa kwexesha lokuhlaziya ifayile. (ukuthenga kwangaphambili, njengoko kufuneka)
Uphuculo oluncinci free Ayibandakanyi ukufuduswa kwedatha ukuba kuyafuneka
Uluhlu lweenkcukacha zempahla, iimpahla, iiwigi, iyunifomu, ukukhanya, iiseti, njl njl.
Nxibelelana nathi ngemibuzo yedemo yasimahla.